प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कसरी दर्ता गरिन्छ? ‘फेल’ भयो भने के हुन्छ? - NewsCenterNepal.com
काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि खडा गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दा बहुमत पुगेन र फेल भयो भने एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव हाल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उता प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पनि आफूहरू प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा नरहेको बताइरहेका छन्। तर देउवा र ओलीबीच लामो समयदेखि निकटता रहेका कारण उनीहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ।